Absolute Duo (Ataki_Fan_Sub) - TOTORO ANIME PLUS
January 29, 2019 January 30, 2019 - LeaveaComment
Airing : Winter 2015 Anime
Stars : 6.7 🌟
ဒီAnimeလေးက 2014မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့Serieလေးပါ။
Light novelကနေတစ်ဆင့် Animeအဖြစ်နဲ့အသက်သွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးစွမ်းအားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့လက်နက်တွေကို Blazeလို့ခေါ်ကြပြီး Blazeကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ၊စွမ်းအားရှိတဲ့သူကိုတော့ Blazerလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။Blazerတွေဟာ သာမန်သူတွေထက် ခွန်အားအရာ၊လျင်မြန်မှုနဲ့ ကြံခိုင်မှုအပိုင်းမှာ ပိုသာကြပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ဖြစ်တည်လာရတာက Torဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် Koryo Academyမှာ ပညာလာသင်တာကစပါတယ်။ Koryo Academyဆိုတာက တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ နာမည်ကြီးလှတဲ့ကျောင်းတော်ပါ။ ကျောင်းသားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးရာမှာ ကောင်းမွန်သလောက် ပြင်းလည်းပြင်းထန်လှပါတယ်။ကျောင်းကချမှတ်တဲ့အမိန့်အရ ကျောင်းသားအချင်းချင်း အရည်အချင်းစစ်စီးချင်းပြိုင်ပွဲမှာ တစ်ခြားသူအားလုံးရဲ့Blazeတွေက လက်နက်ပုံစံအသီးသီးဖြစ်နေကြပေမဲ့ Torရဲ့Blazeက တစ်မူကွဲပြားပြီး ဒိုင်းတစ်ခုအသွင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Irregular(ပုံမှန်မဟုတ်သူ)ဆိုပြီး ကျော်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျောင်းတော်ကိုမဖြစ်မနေတက်ရောက်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားပြီး သန်မာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စကားအရ… ပြင်းပြတဲ့ဒီစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တာက ဘာအကြောင်းတရားလဲ။ ?
Blazeဆိုတာက စိတ်ကတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ ဆန္ဒအရ ဒိုင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့Torက ဘာဆန္ဒရှိခဲ့လို့လဲ။ ?
အတိတ်မှာရော Torကာကွယ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဘာအဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့လို့လဲ။ ?
Absolute Duo (ပြိုင်ဖက်ကင်းနှစ်ယောက်တွဲအဖွဲ့)ဆိုတာဖြစ်လာရအောင် Torရဲ့ တွဲဖက်ကရော ဘာအစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားမှာလဲ။ ?
မေးခွန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာရဲ့အဖြေက ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ရှင်းသွားမှာပါ။
Characterပုံစံတွေက ကလေးဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရပေမယ့်လည်း တကယ့်ကိုပေးချင်တဲ့ Messageက တော်တော်လေးနက်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ဘာလဲဆိုတာကို ပြောစကားတွေထက် Torရဲ့အပြုအမူလေးတွေက သေသေသပ်သပ်လေး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြသွားပါတယ်။(ဂရုစိုက်မှု၊ကြင်နာမှုလေးတွေကို မသိမသာလေးဖော်ပြထားရင်းပေါ့)။ Julieဆိုတဲ့ကလေးမလေးရဲ့အပြုအမူလေးတွေကတော့… (ဆက်မပြောဘူး… အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလို့ကိုယ့်ဖာသာ ကြည့်လိုက်ပါဗျ) Loli နော်.. Loli… Adminတော့ ဒဲ့ကြွေဆင်းတယ်။
Download Links (With Ads)
Episode 01 (Mega Link)
Episode 02 (Mega Link)
Episode 03 (Mega Link)
Episode 04 (Mega Link)
Episode 05 (Mega Link)
Episode 06 (Mega Link)
Episode 07 (Mega Link)
Episode 08 (Mega Link)
Episode 09 (Mega Link)
Episode 10 (Mega Link)
Episode 11 (Mega Link)
Episode 12 (Mega Link) (Final Episode)
Previous Article A Tale Of Worst One (Ataki_Fun_Sub)
Next Article Asobi Asobase (Ataki_Fan_Sub)